Maayarkii Hore Ee Ceergaabo Iyo Maayar Ku Xigeen Cusub Oo Dib Loo Doortay | Araweelo News Network (Archive) -
Ceergaabo(ANN)Golaha Deegaanka ee degmadda Ceerigaabo ee xarunta gobolka Sanaag, ayaa maanta doortay Maayar iyo Maayar ku xigeen. kadib markii qayb ka mida xildhibaanada oo fadhi ay hore u yeesheen oo ay ku doorteen Maayar iyo ku xigeen lagu kala qaybsanaa, kaas
oo lagu tilmaamay mid aan sharciga waafaqsanay.
Hase yeeshee Golaha ayaa mar kale dib u fadhiistay saaka. kadib markii la dhaariyay xildhibaanada golaha deegaanka Ceergaabo oo ka kooban 21 xubnood, kuwaas oo u doortay Maayarka cusub ee magaaladaa Ismaaciil Xaaji Nuur Faarax oo muddo toban sanadood ah Maayar ka ahaa Ceergaabo.
Sidoo kale waxa Maayar xigeenka degmadda Ceerigaabo loo doortay Saalax Ismaaciil Cabaase oo aanay cidi la tartamin waxa markii loo codaynayay fadhiyay 13 Xildhibaan, waxaana ogolaaday 11 Xildhibaan, halka laba xubnood oo kale ay ka aamuseen.
11 xubnood oo ka mid ah 21-ka Xildhibaan ee Ceerigaabo ayaa todobaadkii hore Maayar iyo ku xigeen u kala doortay labadan xubnood ee maantana dib loogu doortay, hase yeeshee. Waxa doorashadaa lagu tilmaamay mid sharci darro ah oo ay is doorteen, iyagoo aan la marin habka uu tilmaamayo xeerku ee dhaarinta xildhibanaada cusub iyo sidoo kale iyadoo aanu goob joog ka ahayn badhasaabka Gobolka Sanaag oo sharciyan goob joog ka noqonaya fadhiga.